IPhone 6x07 Podcast Podcast: Falanqaynta Farsamada ee iPhone 6s | Wararka IPhone
Podcast 6 × 07 ee Actualidad iPhone: Falanqaynta farsamada ee iPhone 6s
Toddobaadkii hore waxaan u hibeynay barnaamijka loo yaqaan 'iPhone News Podcast' si aan uga hadalno soo ifbixinta iPhone 6s ee Isbaanishka waxaanna ka wada hadalnay dareenkii ugu horreeyay ee iibsadayaashii ugu dambeeyay. Jiilka cusub ee iPhone-ka ayaa nala socday muddo bil ah, si rasmi ah, iyo hadda waxaan awoodnay inaan tijaabinno awooddeeda buuxda, oo ay ku jiraan jaangooyooyinku. Marka barnaamijkan waxaan uga hadlaynaa processor-ka cusub (iyo dhammaan noocyada la heli karo). Waxaan sidoo kale kuu sheegeynaa haddii batteriga ay runti saameyn ku yeelato haddii ay processor-ku ka yimaado TMSC ama Samsung.
Waxaan uga jawaabnaa su'aalaha kuwa raacsan annaga oo u marna Periscope: Maxaa ku saabsan JAILBREAK? Sidee batteriga kiiska iPhone 6s? Waxaas oo dhan, iyo inbadan, oo ku saabsan bandhigii toddobaadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Podcast 6 × 07 ee Actualidad iPhone: Falanqaynta farsamada ee iPhone 6s
Dr. Panda: Boostada, waa ciyaarta loogu talagalay carruurta yaryar sida loogu talagalay usbuuca
Jailbreak wuxuu yareeyaa iPhone-ka